FAALADA SHABAKADA: Sidee Xukuumadda Somaliland U Dhayi Doontaa Dhaliilaha Wasaarada Maaliyada? | Somaliland.Org
April 29, 2011	Labadii Todobaad ee la soo dhaafay waxa soo baxayay warar sheegayay in odoraskii miisaaniyad sanadeedka qaranka ee 2011-ka ee uu nashqadeeyay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Eng. Maxamed Xaashi Cilmi uu hoos u dhacay, taasi oo noqotay Dhiilo aan la filayn iyo waji gabaxii koowaad ee soo waajahay wasaaraddaasi oo horaantii sanadkan xil gudashadooda iyo heerka ay gaadh siiyeen dakhli ururinta loo guuxay.
Waxa soo baxday tibaaxo hoose oo sheegayay bishii March ee la soo dhaafay in odoraskii Miisaaniyada qaranka ay is dhintay dakhli dhan 4 Milyan oo Dollar, hoos dhaca iyo hantaaqadaasi ku timid odoroskii wasaarada waxay keenaysaa in Bisha December ee dabayaaqada sanadkan ay miisaaniyada iska dhinto 20 Milyan oo Dollar. taasina waxay dhalisay in Xukuumadda Somaliland ay qaaday olale balaadhan oo ay bulshada ku wacyi gelinayso inay si wadaniyad leh iskaga bixiyaan cashuuraha ku waajibay si xukuumadu uga dhabayso himilooyinkii isbedelka ee ku wajahnaa horumarinta adeegyada bulshada.
Wasaarada Maaliyaddu kumay guulaysan sadexda qodob ee ugu dhumucda weyn waajibaadka shaqo ee ay qarankan ugu xil saaran n oo kala ah:-
•	Dejinta Siyaasada dhaqaale ee wadanka lagu hagayo,
•	Samaynta iyo dejinta miisaaniyada.
•	Cashuraha dalka iyo ururinta dakhliga dalka. Dadka dhaliilaya siyaasada Wasaarada Maaliyada waxay ku doodayaan in odoraska Miisaaniyad sanadeedka qaranka lagu deg degay oo si cilmiya oo qiyaas leh aan loo dejin, taasina ay sababtay inay wasaaraddu ku karaar jabo sadex biloodkii ugu horeeyay ee sanadkaba.
Dhaliilaaha kale ee dhabarka loo saaray wasaaradda Maaliyada waxa ka mid ah qiimihii dollarka oo hoos u dhacay isla markaana aanay arrintaasi waxba ka bedelin qiimihii maceeshaddu taagnayd, in kasta oo todobaadyadii la soo dhaafay sarifkii Dollarku kor u soo kacay sicirkii badeecaddaha daruuriga ahina yara degeen. Haddana waxaa baaxaa degga Ganacsiga oo loo sibir saarayaa inay
ka dhalatay siyaasad xumo ka timid Wasaarada Maaliyadda.
Wasaarada Maaliyada waxa lagu ammaanaa kaliya inay meesha ka saartay dulinkii musuqmaasuqa iyo hantidii ummadda ee la xalaashaday, waxa wasaarada lagu majeertay inay soo noolaysay haybadii iyo dhegtii dawladnimo oo ay noqotay gacan aamin ah oo xafiday dakhli maalmeedka kastamadda oo qudha.
Waxa xiligan u baahan in Wasaaradda Maaliyaddu ay dib u eegis ku samayso dhaliilaheeda tirada badan isla markaana la yimaadaan masuuliyiinta wasaaraddu wada shaqayn hufan oo ay kaga midho dhaliyaan hawshooda.
Wasiirka Maaliyada oo xaalad caafimaad ku jooga dalka Sucuudiga, waxa horyaala dagaal adag oo la xidhiidha sidii uu uga jibo keeni lahaa odoroska miisaaniyada ee is dhimay oo haddii aan wax laga qaban sababi kara in shaqaalaha dawlada iyo ciidamada ee mushaharka loo kordhiyayn 100% ay waayaan mushaharooyinkii.taasina ay noqon doonto caqabad soo waajahda xukuumada Madaxweyne Siilaanyo oo uu sababay khalad uu sameeyay wasiirka Maaliyaddu.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ah dhaqaale yahan aqoon u leh horumarinta dhaqaalaha ayaa la gaadhay inuu xiligii uu faro gelin ku samayn lahaa wadciga dhaqaale iyo bariiqashada ku timid odoraskii Miisaaniyad sanadeedka qaranka.
Previous PostSarkaal Boolis Ah Oo Caawa Lagu Toogtay Magaalada LaascaanoodNext PostHargeysa: Hal Qof Oo Ku Dhintay Qumac Qori Oo Ku Qarxay	Blog